छेपारो नै हुँ की म ? | शहरबाट शब्दहरु
« गीतसँगै जीवनको जीत
अब म बोल्दिन ! »
२८ जेठ । (शुक्रबार)
दिमागले जे भनिन्छ र सोचिन्छ । त्यो गर्न र हुन नसक्नु अल्छीपनको पराकाष्ठा नै हो । मलाई लाग्छ, म छेपारोरुपी मान्छे हुँ । एउटा कथा चर्चित छ ।
छेपारोले घर बनाउन खोज्छ । तर पानीका कारण बनाउन अल्छी मान्छ । सोच्छ, भोली घाम लाग्छ, म अवश्य घर बनाउँछु । यस्तै घटनाक्रममा छेपारो घरको सपना बोकेर घाम कुरिरहन्छ । अल्छी हुँदै वर्तमान काटिरहन्छ । जाडो आउँछ र छेपारोले जाडो धान्न सक्दैन । छेपारोले ज्यान फाल्छ ।
मलाई लाग्छ, म छेपारो नै हुँ । मैले धेरे सपना देखेँ । योजनाहरु छरपष्ट छन्, गर्नुपर्ने अभियान र कामहरुले मलाई घेरिरहन्छन् । म सोच्छु, साइत आउँछ । म जुट्छु । उर्जा बढ्छ, म खट्छु । यस्तै यस्तै अवसरको पर्खाईमा दिन कट्दैछ । मैले यो निजी व्लग (सहरबाट शब्दहरु) मा पनि दैनिकी लेख्छु भनेर पटकपटक वाचा गरिरहन्छु । तर भोली, पर्सी आउँदै गर्दा सब भुसुक्कै ।
म आफूले आफूलाई नराम्ररी गाली गरिरहन्छु । क्षणक्षण सम्झाईरहन्छु, यसो नगर । यो गर्नुहुन्छ । तेरो सपना ठूलो छ, तँ अघि बढ । काममा ध्यान पुगेन । काम गर । म भित्रैको एउटा अर्काे अनुहारले ‘अँ बुझेँ’ भन्दै तर्किएर हिड्न खोज्छ । यताउता काम गर्न खोज्छ । फेरि भोली नयाँ दिनको बिहानै सब हात्ती आयो हात्ती फुस्सा । अहिले यतिमात्रै ।
This entry was posted on जुन 10, 2016 at 7:51 बिहान and is filed under म र मेरो कुरा. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.	You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.